Wiki as a symbol of age and ndash; Semalt Expert Point of View
Wiki as a symbol of age and - Semalt Expert Point of View
Julia Vashneva, manam-pahaizana Semalt , dia milaza fa Wikipedia dia rakipahalalana an-tserasera an-tserasera noho ny "afaka manova", politika izay ampiharina amin'ny ankamaroan'ny votoaty. Ny fanasana azy ireo hanoratra sy hanova lahatsoratra (nitranga in-1): Raha ny fanazavan'ny mpikaroka,
Amin'izao, Wikipedia dia tsy rakipahalalana an-tserasera afa-tsy ihany koa ny vondrom-piarahamonina iray izay nametraka biraon'ny birao. Ny vondrom-piarahamonina dia manana rafi-kery matanjaka izay manome ny fanaraha-maso an-tseraseran'ny governemanta hanafoanana ny votoaty tsy mety ary hiarovana ireo olona mora vendrana.
Ireo fepetra ireo dia mamaritra hoe inona avy ireo fanitsakitsahana tsy voafehin'ny "olon-tsotra afaka manitsy" politika. Na dia miova haingana aza ny lisitr'ireo fidirana ireo, ny sasany amin'ireo votoaty voarakotry ny politika "misy afaka manova" dia ahitana lahatsary 82 manomboka amin'ny lahatsoratra ao amin'i Christina Aguilera amin'i Albert Einstein. Ireo safidy ireo dia voaro amin'ny fanitsiana noho ny fanimbazimbana miverimberina sy ny adihevitra momba ny zavatra tokony hampidirina ao anaty lisitra. Ankoatra ireo rohy 82, dia misy ny fizarana 179 voaaro amin'ny fiarovana, anisan'izany ny votoatin'ny Adolf Hitler, George W. Bush ary ny Silamo. Ireo fanoratana ireo dia tsy misy afa-tsy fanitsiana ireo olona voasoratra anarana ao amin'ny tranonkala mandritra ny efatra andro farafahakeliny.
Ireo fepetra voalaza etsy ambony dia toa manimba ny foto-kevitra demokratika ao amin'ilay tranonkala, na izany aza, Jimmy Wales, ilay mpanorina ny Wikipedia dia nilaza fa fiarovana vonjimaika ny fiarovana ary ny vokatr'izany dia ampahany kely amin'ny ampahany 1,2 tapitrisa amin'ny teny Anglisy- tranonkala fiteny. Araka ny voalazan'ny Mr. Wales, ny fiarovana dia mikendry ny hifehezana ny kalitao, saingy tsy mamaritra Wikipedia. Milaza izy fa ny zavatra mamaritra an'i Wikipedia dia ny fandraisan'anjaran'ireo mpilatsaka an-tsitrapo.
Tany am-piandohana, ny Loholona Wales dia nanome ny vohikala mazava tsara: manome fahalalana maimaimpoana ho an'ny olona rehetra eto an-tany. Nandritra izany fotoana izany, nanangana fitsipika sy fitsipika izy, toy ny fepetra ilaina mba hampisehoana ireo angona amin'ny fomba fijery tsy mitongilana. Toa miasa ny rafitra satria nahavita nanafika tranokala toy ny CNN sy Yahoo News ny Wikipedia
Na dia mihevitra aza ny ankamaroan'ny olona fa manana mpandray anjara 10 tapitrisa eo ho eo i Wikipedia, dia ataon'ny olona vitsivitsy ny ankamaroan'ny asa. Ireo mpandrindra ao amin'ilay tranokala dia mpilatsaka an-tsitrapo avokoa, indrindra amin'ny 20 taona. Ireo dia mifampiresaka tsy tapaka ary mizara ny enta-mavesatry ny fanaraha-maso ireo fanovana tsy ilaina na ratsy. Misy koa rindrambaiko maoderina izay miambina ny fanovana natao tamin'ny lahatsoratra.
Mr. Wales dia manondro ny fanalàm-baraka eo amin'ilay tranokala ho toy ny olana madinika. Na dia izany aza, tamin'ity taona ity, nanapa-kevitra ny fokonolona ny hampiditra ampahany amin'ny fiarovana amin'ny lahatsoratra sasany noho ny fampahalalam-baovao misongadina amin'ny fampahalalam-baovao diso ao amin'ny tranonkala. Ny fotoana fiandrasana mandritra ny 4 andro dia natao hiasa toy izany amin'ny vanim-potoana napetraky ny mpividy basy.
Raha vao maty ny fanafihana, dia miova ny fomba fiasa semi-fiarovana ao amin'ny pejy ka misy afaka manova..Na dia nosoratana ampahany sasany aza ny fidirana sasany tahaka ny an'i Bill Gates nandritra ny andro vitsivitsy tamin'ny volana Janoary, ny lahatsoratra momba ny Filoha Bush dia mbola mijanona ho toy ny fiarovana tanteraka mandritra ny fotoana tsy voafetra.
Araka ny tsikera, ny fiarovana ny fidirana sasantsasany dia maneso ny politikan'ny "olon-tsotra". Nicholas Carr, mpanoratra teknolojia ary mpitsikera saropady ao amin'ny Wikipedia dia milaza fa manomboka toy ny rafitra fanoratana ny tranokala. Ny filazana fa ny tafika amam-pita dia afaka mamorona asa goavana amin'ny fifehezana kely dia ny manova izay Wikipedia, hoy i Carr.
Nefa Atoa Wales dia nilaza fa tsy azo antoka ny fanakianana toy izany satria misy ny sivana ao amin'ny tranonkala. Ankoatra izay, ny mpikatroka Wikipedia dia miteny fa tsy maharitra ela ny ankamaroan'ny tafika hisintaka.
Ny ankamaroan'ny fifanakalozan-kevitra amin'ny Wikipedia matetika no mifantoka amin'ny fahamarinany. Tamin'ny herintaona, nisy lahatsoratra tao amin'ny gazetin'ny Natiora nilaza fa niharatsy kokoa ny fahadisoana tao amin'ny Wikipedia raha oharina tamin'ireo hita ao amin'ny Encyclopedia Britannica. Nohamafisin'ireo manampahefana Britannica mafy io hevitra io.
Na eo aza ny fanakianana, Wikipedia dia miteny fa ny fahamarinan'ny votoaty ao amin'ny tranokala dia mitombo ara-boajanahary. Tamin'ny voalohany, ny fanitsiana rehetra tsy misy idiran'ny teny tsy fantatra, hoy i Wayne Saewyc, mpilatsaka an-tsitrapo Wikipedia. Raha toa ka mitombo ny lahatsoratra ary mitongilana dia mihalalina kokoa ny votoaty.
Ireo mpilatsaka an-tsitrapo ao amin'ny Wikipedia dia matetika milaza fa nahatsiaro ho voavotsotra tamin'ny fotoana voalohany nanaovany izany izy ireo. Kathleen Walsh, mpianatra any amin'ny oniversite, manam-pahaizana amin'ny mozika dia milaza fa rehefa manoratra ho an'ny Wikipedia ianao dia manamarika izao tontolo izao ny tontolo rehetra.
Tsy fantatry ny ankamaroan'ny olona, ​​ny Wikipedia, toy ny ankamaroan'ny orinasam-pandraharahana, dia nateraky ny loza. Mr. Wales, ilay lehilahy tao ambadiky ny tranokala dia mpivarotra hafa izay nitady ny hanomboka rakipahalalana mifototra amin'ny aterineto fantatra amin'ny anarana hoe Nupedia.com. Taorian'ny nahasarika mpandray anjara vitsy an'isa, dia nanomboka ny Wikipedia teo an-damosiny i Mr. Wales, izay nitombo be.
Nandritra ny taona niforona, dia nandoa ny fandaniana tao amin'ny paosiny i Mr. Wales. Androany, ny Fondation Wikimedia, fikambanana tsy miankina iray manohana ny Wikipedia dia mitantana amin'ny fanomezana.
Amin'izao fotoana izao, Mr. Wales no mitantana ny Wikipedia miaraka amin'ny fanampian'ny mpiasa voavidy 4. Mino ny fahefana amin'ny alàlan'ny teknolojia amin'ny alàlan'ny alàlan'ny pejy amin'ny alàlan'ny alàlan'ny fanovana Wikipedia izy. Tamin'ny taona 2004, nanombohany i Wikia, fanombohana iray izay mamela ny olona hanorina toerana mifototra amin'ny fiarahamonina mahaliana. Ohatra, Wiki 24 dia rakipahalalana tsy ofisialy ho an'ny fandaharana "24".
Ankehitriny, nanjary lasa marika famantarana ny tranonkala ny Wikipedia. Miresaka betsaka momba ny hoavin'ny famoronana fahalalana izy io. Midika izany fa tsy miankina amin'ny herim-po sy ny fiaraha-miasa intsony ny olona amin'ny hoavy, hoy i Mitchell Kapor, filohan'ny Open Source Applications Foundation Source .